बजारमा आँप विषालुभएकाले उपभोक्ता विषको सिकार » खबरहरुको एउटै केन्द्र
बजारमा आँप विषालुभएकाले उपभोक्ता विषको सिकार
बिहीबार, बैशाख १४, २०७४ ०८:२२ मा प्रकाशित !
वीरगन्ज, वैशाख १४ गते
रसायन हालेर पकाएको भारतीय आँप वीरगन्जको स्थानीय बजारमा खुलेआम बिक्री हुने गरेकाले उपभोक्ता मन्द विषको सिकार हुन थालेका छन् । खासगरी प्राकृतिकरुपमा आँप पाक्ने समय असार महिनाको अन्त्यदेखि साउन/भदौ महिनाको समय भएपनि स्थानीय बजारमा भने वैशाख सुरुदेखि नै आँपले बजार कब्जा गरेको देखिन्छ । बिक्रीका लागि राखिएका यस्ता भारतीय आँपको परीक्षण नहँुदा उपभोक्ता विषाक्त आँप खान बाध्य देखिन्छन् । यसले गर्दा खाद्य बजार विषालु बन्दै गएको छ भने अर्काेतिर उपभोक्ता मन्द विषको सिकार भई विभिन्न रोगबाट प्रभावित भएको देखिन्छ ।
PREVIOUS POST Previous post: उम्मेदवार सिफारिस भए नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका
NEXT POST Next post: आगलागीमा ६ वटा घर जले
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते बिहीबार, बैशाख १४, २०७४ ०८:२२
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस बिहीबार, बैशाख १४, २०७४ ०८:२२
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण बिहीबार, बैशाख १४, २०७४ ०८:२२
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी बिहीबार, बैशाख १४, २०७४ ०८:२२
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? बिहीबार, बैशाख १४, २०७४ ०८:२२